Malunga us - AlorAir
iiyunithi zethu crawlspace kunye ongaphantsi nazo eklasini ehamba neempawu ezifana ulawulo lwedijithali, ukufikelela lula, plug-n-umdlalo izakhi kunye impompo condensate ehlanganisiweyo iqela lethu crawlspace tye! Yongeza ezi mpawu, uyilo indawo ayisindi iinketho ezahlukeneyo ukuhluza, iinketho zolawulo kunye umbhobho kude, le yunithi iza enanditshwa installers nabathengi.
iimveliso AlorAir babe izitifiketi ezahlukeneyo kuxhomekeke ekusetyenzisweni yabo kwezo kuquka iinketho Energy Star, CE, ETL SAA, SGS kunye TUV. iimveliso zethu yenzelwe, ze avavanywe futhi ukuba inshorensi nqanaba liphezulu umgangatho kubaxumi bethu. iinjineli zethu ziyaqhuba tyhala imvulophu ngamanqanaba zentsebenzo ezintsha kunye neempawu ukukholisa abaxumi bethu.
Injongo yethu kukuba ukuqalisa rhoqo kwaye ikhuphe imveliso egqwesileyo kakhulu ekugcineni ukubaluleka. AlorAir uthembisa ukuba asebenzise ezona izibonelelo, ubugcisa, izixhobo kunye nenkxaso emva-kwentengiso ukwenza lo msebenzi ube yimpumelelo kubaxumi bethu.